राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब घाटा हुने ! पढ्नुहोस | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > अर्थ > राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब घाटा हुने ! पढ्नुहोस
राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब घाटा हुने ! पढ्नुहोस
२५ चैत, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरु आज पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणकै वरिपरि घुमेका छन् । पत्रपत्रिकाहरुले विद्युत्तीय रेलदेखि पानीजहाज चलाउनेसम्मका विषयमा भएको सम्झौतासँगै भ्रमणको विश्लेषणसमेत गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणः विद्युत्तीय रेलदेखि पानीजहाज चलाउनेसम्मका सम्झौता’ शीर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युत्तीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमतिदेखि नेपाललाई समुद्रसँग जोड्नेसम्मका सम्झौता भएका छन् । शिलान्साय गरेको झन्डै एक दशकपछि वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच भन्सार चौकी पनि सञ्चालनमा आएको छ’, नयाँ पत्रिकाले समाचारको लिडमा लेखेको छ ।
यसका अलावा सिन्डिकेटबाट राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब घाटालाई पनि नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेको छ ।
‘सम्बन्ध नयाँ उचाइमा’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको अन्नपूर्णले भ्रमणबारेको सूचनामूलक जानकारीसँगै विश्लेषणसमेत पस्केको छ ।
कान्तिपुरले पनि अन्य दैनिक पत्रिकाहरुले जस्तै ओलीको भारत भ्रमणकै विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । कान्तिपुरले ओली र मोदीले व्यक्त गरेका भनाइलाई अलग–अलग शीर्षक दिएर छापेको छ ।
सरकारको कामप्रति प्रचण्ड नै असन्तुष्ट
राजधानी दैनिकले वर्तमान सरकारको काम कारबाहीप्रति सरकारको मुख्य सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नै असन्तुष्ट देखिएको लेखेको छ ।
पार्टी एकताको अन्तिम चरणमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा सरकार गठन गरे पनि सरकार सञ्चालन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
‘अहिले सरकार सञ्चालन सही तरिकाबाट भएको देखिन्न’, प्रेस सेन्टरका नेताहरुसँगको भेटघाटमा प्रचण्डले व्यक्त गरेको भनाइ कोड गर्दै राजधानीले लेखेको छ, ‘सरकार सञ्चालनको विधि र तौरतरिका अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुको कार्यशैली ठीक नभएको बारे भने विस्तृतमा नखुलाएको समाचारमा उल्लेख छ । तर उनले सरकारको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन विधि बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका रुपमा बिहीबार साँझ ३० सचिवको सरुवा गरेका थिए । कुनै पनि मन्त्रीहरुसँग सुझाव र छलफल नै नगरी सचिवहरुको सरुवा भएको भन्दै एमाले–माओवादी दुवैबाट सरकारमा सहभागिता जनाउने मन्त्रीहरु नै असन्तुष्ट छन् ।
माओवादी केन्द्रले एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्यमा सहमति नजनाउने प्रष्ट पारेको छ । राजधानीका अनुसार, प्रचण्डले सूर्य चिह्नमा सहमति हुन नसक्ने बताएका हुन् । उनले हँसिया हथौडा भने मान्य हुने बताएका छन् ।
सिन्डिकेटबाट राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब घाटा
नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको कार्यान्वयनसँगै कानुनी रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको २७ वर्ष पूरा भएको छ । यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको पनि २५ वर्ष बितिसकेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा भने सार्वजनिक यातायातमा देशभर अझै सिन्डिकेट छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार, सिन्डिकेटबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले सबै यातायात समिति कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर अडिट गरी नाफा–नोक्सान देखाउने हो भने देशको ढुकुटीमा न्यूनतम एक अर्ब राजस्व जम्मा हुने नयाँ पत्रिकालाई बताएका छन् ।
सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुनको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैल्याएका छन् । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ उल्लेख छ
अब राजधानीमै ‘कर्नाली’
राजधानीमै कर्णालीको सभ्यतासहित कला, संस्कृति, सम्पदा एकसाथ हेर्न पाइने भएको छ । भक्तपुरको पलाँसेस्थित काठमाडौं फन भ्यालीभित्र ‘कर्नाली ढुकुरी’ संग्रहालय सञ्चालनमा आएपछि राजधानीमै बसेर कर्णालीको अवलोकन गर्न पाइने भएको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
कर्णाली अञ्चलका दुई सय ७८ वर्ष पुराना सम्पदा र दक्षिण एसियाली देशका यस्तै संस्कृति, सभ्यता र सम्पदालाई समेटेर संग्रहालय सञ्चालन गरिएको छ । करिब १५ वर्षको प्रयासपछि यो संग्रहालय स्थापना भएको हो ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–२ का गोविन्द नेपालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘सोसियो कल्चरल एसेट्स अफ दलित फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ विषयमा विद्यावारिधि गर्ने क्रममा संकलन गरेका सामग्रीलाई संग्रहालयमा राखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
संग्रहालयमा कर्णालीका जिल्लाका साथै दक्षिण अफगानिस्तान, भुटान, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, भियतनाम र भारतका पनि यस्ता बहुमूल्य संस्कृति, सभ्यता र सम्पदा राखिएको छ । यसै सातादेखि सञ्चालनमा आएको उक्त संग्रहालयमार्फत कर्णालीको कला, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदालाई विश्वभर चिनाउने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ । onblinekhabar
मोदी संग भेट्ने बितिकै प्रधानमन्त्री ओलीले गरे लिखित यस्तो सम्झौता,वाम एकता नहुदै ओली-मोदी ‘गठबन्धन’ सम्पन्न
बुटवलस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा आगलागी
बेपत्ता भएको ९ महिनापछि कंकाल भेटियो
राजदूतावासको कार्यालयमा बम बिस्फोट गराउने थप एक पक्राउ
किन गरे कैदीले जेलभित्रै आत्महत्या ?पढ्नुहोस्
अब युभेन्टसलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउने चाहना छ : रोनाल्डो
sangita nanu July 17, 2018
धरानका मेयर तारा सुब्बाको उपचारको क्रममा निधन
७७ वटै जिल्लामा नयाँ मतदाता नामावली दर्ता अभियान आजैबाट सुरु
माग पूरा नभए सबै सेवा बन्द गरिने चिकित्सा संघको चेतावनी
आज साउने संक्रान्ति, लुतो फाल्ने दिन देशभर मनाइँदै